चुच्चे नक्सा गायबबारे रावलको प्रश्न: वालुवाटारमा विदेशी गुप्तचरसँगको मन्त्रणा त होइन ? « Drishti News – Nepalese News Portal
चुच्चे नक्सा गायबबारे रावलको प्रश्न: वालुवाटारमा विदेशी गुप्तचरसँगको मन्त्रणा त होइन ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वितरण गरेको विभिन्न मानपदवी तथा पदकबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको छ । पदकको बीच भागमा रहेको नेपालको नक्सामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको भूभागसहितको चुच्चे नक्सा गायब भएपछि सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक आलोचना भईरहेको छ ।
यसबारे सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै नेता भीम रावलले पनि तक्मामा नेपालको नयाँ नक्सा नराखिएकोप्रति गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।